Chile: Toeram-Pandiovana (Refinery) Misokatra Indray Na Teo Aza Ny Fahampoizinana Tany An-Tsekoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2011 3:40 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, македонски, Italiano, Ελληνικά, Español
Nanapa-kevitra nanakatona sekoly iray ny Ministeran'ny Fahasalamana tany Chile tamin'ny 23 Martsa 2011, taorian'ny fanamarinana fisianà tranga 40 [es] olontsotra sy mpianatra voapoizin'ny solifara, varahina sy akora hafa miaty solifara tany La Greda, any amin'ny faritr'i Valparaiso. Ireny olona voa ireny dia niaina aretin'andoha sy fandoavana rehefa nahafoka “entona manga iray” avy ao amin'ny toby fandrendehana an'ilay orinasam-panjakana Codelco (Orinasam-Panjakana Mitrandraka Varahina any Chile). Ankoatra an'i La Greda, mponina sasany amin'ny faritra manodidina ihany koa, toy ny any Horcón [es] sy La Chocota [es], no tratr'ity loza ity izay, araka ny nambaran'ny Codelco, dia avy amin'ny tsy fetezana nitranga nandritra ny fanodinana ilay metaly.
Ny faritra indostrialy ao Ventanas, Chile. Sary avy amin'i Fernando Mandujano, mpampiasa Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).
Ankoatry ny fanakatonana vonjimaika ilay sekoly, tamin'ny 30 Martsa, Fitsarana iray tao Valparaiso no nanameloka ny Codelco hampiato ny fandrendrehana[es] any amin'ny toby fandrendrehany ao “Ventanas” raha mbola mitohy kosa ny fitohizan'ny raharaham-pitsarana ny Filankevitra Ara-tontolo Iainana ao Quintero sy ireo mpiasa taloha tao amin'ny Enami [es]- Codelco amin'izao fotoana- nitarika ny fanakatonana ny ornasa mandritra ny fanadihadiana.
Tamin'ny 30 Martsa, nampahafantatra i @CEFIRAX, mpitoraka bilaogy, mikasika ireo vaovao ireotayamin'ny Twitter:
Naaton'ny fitsarana ny asa ao #Ventanas noho ny fandotoana tany #Puchuncaví #Contaminatingcountry #carbonfootprint
Paola Arévalo (@Lolitalolein) dia nanome ny heviny momba io andro io:
Isaorana Andramanitra fa fepetra mendrika no noraisin-dry zareo , tsy nila nanakatona ny sekoly tao #LaGreda mba hamahàna ity olana ity, fa ny fampiatoana ny fandrendrehana ao #ventanas. Nivandravandra kosa e!
Raha nampahafantatra kosa ny “Antoko Ekolojista” (@ecologistachile) :
Naaton'ny fitsarana ny fandrendrehana ao Ventanas an'ny Codelco noho ny fandotoana nahazo ny sekoly iray tao La Greda…http://fb.me/Uxe8fmWo
Marta Barba, mpikaroka, (@martukabarba) dia nanoratra koa:
Soa ihany, nirona tany amin'ny sekoly ny fanapahan-dry zareo fa tsy tany amin'ny orinasa fandrendrehana ao #ventanas … hatreto. Aleo jerentsika izay hiseho.
Ricardo Díaz (@Aaeero) nientanentana ery niteny he:
Milay! Naato i #Ventanas, faniriako no nanakatonana azy io. Mampalahelo ny mponina ao Puchuncavi! Ankehitriny dia mila mandranitra azy ireo ianareo mba hanakatonany an'io orinasa io. Tafahoatra loatra izany!!
Ilay mpanao gazety, María Paz llanes (@MPazIS), koa dia nankalaza ity vaovao ity:
Zava-dehibe ny hoe nakatona i #ventanas. Ny fihazonana azy io hivoha dia sahala amin'ny fihazonana am-ponja ny tra-doza kanefa ny mpangalatra kosa miriaria.
Na izany aza, ilay fitsarana izay namoaka didy fanakatonana ilay orinasa ihany, no nanome alalana indray ny hanohana azy io 24 ora latsaka taorian'ny nampidiran'ny Codelco fampakarana didim-pitsarana, nampiseho taratasy avy amin'ny Lehiben'ny Departemantan'ny Sekreteram-Paritry ny Ministeran'ny Fahasalamana, Juan Luis Solari, ny orinasa, milaza fa tsy manihintohina ny fahasalaman'ny vahoaka ny asa fandrendrehana.
Fanampin'io, ny Alatsinainy manaraka, 4 Aprily, nahazo alalana hiverina an-tsekoly [es] ny mpianatra tao La Greda taorian'ny fanamafisan'ny Ministeran'ny Fahasalamana fa hoe nanao fanekena an-tsoratra nampanantena ny Codelco fa tsy hisy intsony ny tranga mitovy amin'ny toy ny teo mandritra ny telo volana aorian'ny nivohan'ny sekoly, alohan'ny hamindrana azy io any aminà faritra hafa izay tsy hanohintohina intsony ny teo-pahasalaman'ny ankizy.
Ny Filankevitry ny tanàna ao Puchuncavi, ireo mpiasa fahiny tao amin'ny Enami sy ireo vondrona mpiaro ny tontolo iainana dia mitady ny fomba atao mba hanafoanana ilay fahazoan-dàlana nomen'ny Fitsarana Ambony tao Valparaiso izay namela indray an'ilay orinasa hisokatra.
Hatramin'ny 31 Martsa, hanigana be ny fipoitran'ireo fanehoan-kevitra tao amin'ny Twitter. Angélica Salcedo (@angelicasalcedo), mpanao gazety, dia manohana ny hoe:
Tsy tokony hifototra amin'ny fanimbàna ny tontolo iainana ny firoboroboana ara-toekarena #Ventanas
Willy Flores (@willyflores) nanontany:
Tena karazan-javatra hafahafa no mitranga ao #Codelco #Ventanas, sa tsy izany?
@cubicado nanamarika hoe,
Ny fandravàna tanteraka sy tsotra izao ny #Ventanas, #Puchuncaví sy #LaGreda ataon'ny ENAMI/CODELCO dia tantara efa ela. 40 taona no efa namono olona ry zareo ireo.
Daniel Fuentealba (@dfuentealba) , mpitoraka bilaogy dia niteny hoe:
Ihomehezan'ny Codelco fotsiny ny fitsarana ambony… mbola mihodina foana ny #ventanas. Amin-javatra toy izao, tsy misy ilàna azy mihitsy ny fanadihadiana momba ny fiantraikany ara-tontolo iainana
Melanie Weissohn (@meluweissohn) nangataka ,
fampandraisana andraikitra sy #Fanarahamaso #Monitoring henjana ny #Codelco #Ventanas ary ho an'ireo orinasa rehetra mamoaka sy mandefa fako #misy poizina #toxic
Mbola ho ela vao hifarana ny resabe. Lahatsoratra iray [es] manamafy fa tsy olana vaovao akory izay fandotoana izay any La Greda no navoaka tao amin'ny gazety anaty aterineto El Mostrador tamin'ny 01 Aprily. Fanampin'io, misy ireo fiampangàna mikasika fandrahonana atao amin'ireo mponina manodidina tahaka izay nampahafantarin'ny Radio Cooperativa sy nomarihan'ilay mpandrindra vaovao Canal_Chile tao amin'ny Twitter :
Ampangain'ireo mponina manodidina ho “mandrahona” azy ny #Ventanas #Codelco http://t.co/2eDnhG2 via @Cooperativa
Mbola fery vao ity tranga ity.
Ny toby fandiovana ao amin'ny Ventanas, Chile. Sary avy amin'i lukas_y2k, mpampiasa Flickr (CC BY-NC 2.0).